China Ziyini izinzuzo zemithombo ekhanyayo ye-LED? imboni nabakhiqizi | I-REIDZ
Yiziphi izinzuzo zemithombo ekhanyayo ye-LED?
Njengesizukulwane esisha somthombo wokukhanya, umthombo okhanyayo we-LED uthola indawo ekhanyayo ekhanyayo ye-LED, engakhipha imibala ehlukene ngokusho kwezidingo; ngasikhathi sinye, nayo ingakhiwa nge-microcomputer chip, ngokulawulwa kwezinhlelo, ukufezekisa imiphumela yombala ogcwele njenge-gradient enemibala, gxuma, scan, namanzi; futhi Isibuko sokuboniswa sencazelo ethile singathathelwa indawo ukuhlanganiswa okuningilizayo nokwakheka kwamaphikseli womthombo wamaphuzu amaningi, kanye namaphethini ahlukahlukene, umbhalo nokugqwayiza, imiphumela yevidiyo, njll. kungashintshwa; imithombo ekhanyayo yamaphuzu isetshenziswa kabanzi kakhulu kumaphrojekthi wokukhanya kwendawo yangaphandle.
Imithombo ekhanyayo ye-LED iphuzu ihluke kakhulu kwimisebe yokushisa engokwesiko nemithombo yokukhanya yokuphehla igesi (njengamalambu we-incandescent, amalambu esodium aphezulu kakhulu).
Imithombo ekhanyayo ye-LED point manje inezinzuzo ezilandelayo ekukhanyiseni:
1. okuhle kokuzamazama komhlaba nokuma komthelela
Isisekelo esiyisisekelo somthombo wokukhanya we-LED ukubeka izinto ze-electroluminescent semiconductor ohlakeni lokuhola, bese uyisayina nge-epoxy resin ezungezile. Akukho igobolondo lengilazi esakhiweni. Asikho isidingo sokugcoba noma ukugcwalisa igesi ethile kushubhu efana namalambu we-incandescent noma we-fluorescent. Ngakho-ke, umthombo wokukhanya we-LED unokwehluleka okuhle kokumelana nokushayisana komthelela, okuletha kube lula ukukhiqizwa, ukuthutha kanye nokusetshenziswa komthombo wokukhanya we-LED.
2. iphephile futhi izinzile
Umthombo wokukhanya wephuzu le-LED ungaqhutshwa ngogesi omncane we-DC. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, amandla kagesi wokuhambisa aphakathi kwama-6 no-24 volts, futhi ukusebenza kokuphepha kungcono. Ilungele ukusetshenziswa ezindaweni zomphakathi. Ngaphezu kwalokho, endaweni engcono yangaphandle, umthombo wokukhanya unokukhanya okuncane okulula kunemithombo yokukhanya yendabuko futhi unempilo ende. Noma ivulwa futhi icishwa kaningi, isikhathi sayo sokuphila ngeke sithinteke.
3. ukusebenza kahle kwemvelo
Ngenxa yokuthi umthombo okhanyayo we-LED awufaki i-iron ze-elensi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ngeke ubangele ukungcoliswa kwe-zebus emva kokulahlwa, futhi imfucuza yayo ingaphinda ibuye kabusha, isise izinsiza futhi ivikele nemvelo.
4. isikhathi sokuphendula okusheshayo
Isikhathi sokuphendula samalambu we-incandescent ngama-millisecond, futhi isikhathi sokuphendula sokukhanyisa ngama-nanoseconds. Ngakho-ke, isetshenziswe kabanzi emikhakheni yamalambu omgwaqo namalambu ezimoto.
5. ukulungiswa kokukhanya okuhle
Ngokomgomo womthombo wokukhanya wephuzu le-LED, ukukhanya okukhanyayo noma i-flux yokukhipha kushintshwe kahle kusuka kokuyisisekelo samanje. Ukusebenza kwaso njengamanje kungaba kukhulu noma kukuncane ngaphakathi kwebanga elilinganisiwe, futhi kunokushintshwa okuhle, okubeka isisekelo sokufeza ukukhanyisa okweneliswe abasebenzisi kanye nokukhanya okunganyakazi kokulawula kwemithombo ekhanyayo ye-LED.